août 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 24/08/2014 – Toriteny
I Kristy no iorenan’ny fiainantsika sy ny fahefan’ny Eglizy.
Dia voalaza ao @ Evanjely teo I Jesoa tonga tany @ faritanin’I Sezarean’I Filipo, izany hoe ivalan’I Palestina io, ivelan’ny firenen’Israely. T@ heriny koa dia henontsika fa tany ivelany koa I Jesoa, izany no nahatonga an’ilay vehivavy kananeana nangataka t@ Jesoa hanasitrana ny zanany. Dia mboal any ivelany Jesoa eto no manontany ny mpianatra.
Fanontaniana napetraky Jesoa: “Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’Olona, ary iza no fiheveran’ny olona ahy?”. Dia samy namely ny mpianatra. Ny sasany manao hoe Joany Batista, ny sasany Elia, ny sasany Jeremia na ny anankiray @ mpaminany. Raha nanontany hoe ahoana ny filazan’ny olona momba ahy, dia samy manna-kambara daholo ary misy valin-teny maro. Fa ao anatin’ireo valin-teny omen’ny olona ireo dia ahitantsika fa ny olon-drehetra izany mahita an’I Jesoa dia tsy oloan mahazatra (ordinaire), tsy olona tahaka ny olona rehetra fa manana ny maha-izy azy sy ny hasiny manokana. Mazava iny.
Fa rehefa avy eo Jesoa nitodika t@ mpianany manokana @izay: “Fa ianareo kosa, ataonareo ho iza aho?”. Eo vao mifampijery ny mpianatra. Piera irery sisa no nahavaly: “Ianao no Kristy Zanak’Andriamanitra velona”. Finoana io, tahaka ny nataon’I Tômà ihany: “Tompoko sy Andriamanitro”. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 24/08/2014 – Toriteny
Alahady – 24/08/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (22, 19-23)
Hapetraka eo an-tsorony ny fanalahhidin’ny tranon’i Davida
Horoahiko hiala eo amin’ny fitoeranao hianao, haongan’ny Tompo amin’ny raharahanao hianao. Ary iza no hitranga amin’izany andro izany: Hiantso ny mpanompoko aho, dia Eliasima zanak’i Helkiasa, ka hampiakanjoiko azy ny akanjo vitinao, hampanaoviko azy ny samboadinao; hapetrako eo am-pelatanany ny fahefanao; dia ho tonga ray izy amin’ny mponina ao Jerosalema, sy amin’ny taranak’i Joda. Hapetrako eo an-tsorony ny fanalahidin’ny tranon’i Davida, ka hamoha izy, tsy hisy handrindrina; handrindrina izy, tsy hisy hamoha. Hatsatoko toy ny fantsika amin’ny fitoerana mafy izy, ka hanjary sezam-boninahitra ho an’ny ankohonan-drainy.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma (11, 33-36)
Avy aminy sy noho izy ary ho Azy ny zavatra rehetra.
Ry kristianina havana, endrey, lalina tsy manam-paharitana ny fahendrena amam-pahaizan’Andriamanitra, tsy azo fantarina ny fitsarany, ary tsy takatry ny saina ny làlany! Fa iza moa no nahalala izay hevitry ny Tompo, ary zovy no mpanolo-tsaina azy? Sa iza no nanome azy aloha, mba hahazoany valin’izany?Avy aminy sy noho izy ary ho azy ny zavatra rehetra. Eny, izy no homem-boninahitra mandrakizay. Amena.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (16, 13-20)
Ianao no Piera, ary omeko anao ny fanalahidin’ny lanitra. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 24/08/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady – 17/08/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (56, 1. 6-7)
Ny zanaky ny vahiny hoentiko ao an-tendrombohitro masina.
Izao no lazain’ny Tompo: Tandremo ny hitsiny ary araho ny rariny, fa efa akaiky ny famonjeko, ary efa hiseho ny fahamarinako. Ary ny hafa firenena izay mifikitra amin’ny Tompo mba hanompo Azy sy ho tia ny Anarany, ary ho mpanompony; izay rehetra mitandrina ny sabata fa tsy mandika azy, sy miraikitra mafy amin’ny fanekeko, dia ho entiko ho ao an-tendrombohitro masina, sy hampifaliako ao an-tranoko fivavahana, hankasitrahana eo ambony ôtely ny sorony dorana aman-tsorony: fa ny tranoko hatao hoe: “Trano fivavahana ho an’ny firenena rehetra.”
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma (11, 13-15. 29-32)
Tsy misy anenenany ny fanomezan’Andriamanitra sy ny fiantsoany an’i Israely.
Aminareo Jentily havana no itenenako: amin’ny maha-Apôstôlin’ny Jentily ahy, dia manome voninahitra ny fandraharahana nomena ahy aho, mba hahavelom-pialonana an’ireo tapako, sy hamonjy ny sasany amin’izy ireo, raha azo atao. Raha ny fanariana azy àry no fampihavanana an’izao tontolo izao, hanao ahoana kosa ny fandraisana azy: tsy ho fitsangan-ko velona va? Satria tsy misy anenenany ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan’Andriamanitra. Fa ianareo fahiny mba tsy nanaiky an’Andriamanitra ihany, nefa noho ny tsy naneken’ izy ireny dia nahazo famindram-po ankehitriny. Toy izany koa izy ireny ankehitriny, tsy manaiky an’Andriamanitra izy, nefa noho ny famindram-po azonareo, dia hahazo famindram-po toraka izany koa. Fa samy nohidian’Andriamanitra tamin’ny tsy fanekena ny olona rehetra, mba samy hamindrany fo avokoa.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (15, 21-28)
Ravehivavy, lehibe ny finoanao. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 17/08/2014 – Tenin’Andriamanitra
Mankalaza an’i Masina Maria nampakarina velona any an-danitra ny Fiangonana androany.
Araka ny voalaza teo, fanontaniana apetraky ny olona ny hoe: “aiza ho aiza ao @ baiboly ary no misy an’izany fa ireto katôlika ireto miteniteny foana ary mamoron-javatra”.
Ary io no tsy maintsy ho tandremantsika io, ary hambarako rehefa avy eo fa androany no ho fantatrareo hoe inona marina, ary nahoana ny fiangonana katôlika no sahy mijoro; miteny, ary mino fa hoe nampakarina any an-danitra I Masina Maria.
Ny antony manko di any hoe aiza ao @ baiboly no misy an’izay, satria ho an’ny finoana hafa dia tsy misy afa-tsy ny voasoratra ao anatin’ny baiboly ihany. Fa misy nefa ny atao hoe lovan-tsofina ao @ Eglizy ayr izay no nahatonga ny baiboly hafa ankoatra ny an’ny katôlika tsy ampy fito. Ilaina ihany angamba ny mampatsiahy an’izay. Ny baiboly katôlika, ao @ Testamenta taloha dia misy boky 46, fa ny baiboly ankoatra ny katôlika soa dia 39 ihany. Eo manko isika indraindray mapifangaro rehefa miteny hoe “ baiboly iray ihany”. Fa tsy baiboly iray ihany io. Ho an’ireo izay tena mandinika sy mamaky ny soratra masina dia mahita ianareo, ary izahay any @ sekoly katôlika dia miteny fa tsy mahazo mampiasa baiboly hafa afa-tsy ny baiboly katôlika satria manimba zavatra io.
Ekena fa iray ihany ny Andriamanitra inoantsika, fa ny fomba ahalalana an’Andriamanitra ao anatin’ny soratra masina no samy manana ny fomba itondrany aza. Ka ny mahatonga ahy miteny an’izay di any atao hoe lovan-tsofina. (suite…)
Continuer la lecture Alakamisy – 15/08/2014 – Toriteny
Alakamisy – 15/08/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Boky Fanambaràna nosoratan’i Md Joany (Apôk 11, 19a; 12, 1-6ab. 10ab)
Nisy vehivavy nitafy masoandro ary ny volana no teo an-tongony.
Novohaina ny Tempolin’Andriamanitra any an-danitra, ka niseho teo anatin’ny Tempoliny ny fiaran’ny fanekena. Nony inona, nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra, dia Vehivavy anankiray nitafy masoandro, ny volana no teo an-tongony, kintana roa ambin’ny folo no satro-boninahitra teny an-dohany. Bevohoka izy, sady nihetsi-jaza, ka nitaraina noho ny fanaintainam-piterahana. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra, dia Dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka, fito ny lohany, folo ny tandrony, ary satro-boninahitra fito no teny an-dohany. Nofinaokany tamin’ny rambony ny ampahatelon’ny kitan’ny lanitra ka nazerany tamin’ny tany. Dia nijoro teo anoloan-dRavehivavy hiteraka izy mba handrapaka ny Zanany, raha vao teraka. Tera-dahy Ravehivavy, ary io Zanany io no hifehy ny firenena rehetra amin’ny tsora-by, ka nakarina ho any amin’Andriamanitra eo anilan’ny seza fiandrianany. Fa Ravehivavy kosa nandositra nankany an’efitra, fa any no nanamboaran’Andriamanitra toerana ho azy. Dia nandre feo mahery tany an-danitra aho, nanao hoe: “Ankehitriny dia an’Andriamanitra ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakana; an’i Kristy koa ny fahefana”.
Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1Kôr 15, 20-26b)
I Kristy no santatra vao izay ny an’i Kristy.
Ry kristianina havana, efa nitsangan-ko velona tokoa i Kristy, ary Izy no santatr’ izay efa nody mandry; satria olona iray no niavian’ny fahafatesana dia olona iray koa no iavian’ny fitsangan-ko velona; ary toy ny ahafatesan’ny olon-drehetra ao amin’i Adama, no hahaveloman’ny olon-drehetra ao amin’i Kristy, fa manaraka ny laharany avy: i Kristy no santatra, vao izay ny an’i Kristy amin’ny andro hiaviany. Rehefa afaka izany, tonga ny farany, dia rahatrizay hatolony ho an’ Andriamanitra Ray ny fanjakana, rehefa levony avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny hery rehetra. Satria tsy maintsy manjaka Izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra eo ambanin’ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Lioka (1, 39-56)
Nanao zava-dehibe tamiko ilay Mahefa; nasandrany ireo manetry tena (suite…)
Continuer la lecture Alakamisy – 15/08/2014 – Tenin’Andriamanitra